We are ready for "THE OSCARS 2020"-I | काव्यालय
We are ready for “THE OSCARS 2020”-I
by रितेश ३० कार्तिक २०७६
अक्स्फोड डिस्नेरीको पहिलो संस्करण कहिले छापियो ? शब्दहरु संकलनमा कस-कसले कस्ता योगदान दिए ? अक्स्फोर्ड डिस्नेरीको पहिलो इडिसन छाप्ने जिम्मा प्रोफेसर जेम्सले पाउछन् । उनी शब्द संकलनमा आफुलाई सहयोग गर्नका लागि सब्बैतिर चिठी पठाउछन् । आफुलाई कुनै अपरिचितले मार्न खोज्दै छ भन्ने भ्रममा एकदिन विलियमले एउटा निर्दोषलाई मारिदिन्छ । उनी दोषी मात्रै होइन, पागल पनि प्रमाणीत हुन्छन् । उसलाई पागलखानामा राखिन्छ । त्यहाँ शब्दहरुसँग उसको प्रेम बस्छ ।
शब्द संकलन गरिरहेका जेम्सलाई पागलखानाबाटै विलियमले सहयोग गरिरहन्छ । यसरी दुईजना जोडिन्छन्, एउटा प्रोफेसर अर्को पागल । फिल्म हरेक कोणबाट उत्कृष्ट छ । फिल्मले अक्स्फोर्ड डिस्नेरीको सुरुवाती समय मात्रै देखाउदैन यसले दुई पात्रको कथा, ब्यथा पनि देखाउछ । माया देखाउछ, पश्चताप देखाउछ, घृणा देखाउछ, मित्रता देखाउछ, संघर्ष देखाउछ । फिल्मको मेरुदण्ड अभिनय हो । प्रोफेसर बनेका छन्, मेल गिब्सन । म्याडम्यान बनेका छन्, सेन पेन । दुबैको अभिनय जोडदार छ । अझ सेन पेनको अभिनयको त कुरै नगरौं । तपाईंलाई पिरै पगालिदिन्छ / गालिदिन्छ ।
सानो गल्तीले पनि ठूलो नोक्सानी गर्छ । एउटा सानो निर्णयले जिवन’नै बर्बाद पार्न सक्छ । फिल्म हाइस्कुल वरिपरि घुम्छ । एउटा शिक्षक र विद्यार्थीको कथा हो लुस । यी दुईसँग जोडिएको परिवारको कथा हो लुस । स्कुलको शख्त शिक्षकको शख्त निर्णयले टिनएज मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ ? त्यसपछी कस्तो परिणाम निस्किन्छ ?
लुस अश्वेत वर्णको हुन्छ, जसलाई श्वेत दम्पतिले एडप्ट गर्छन् । पाल्छन्, पढाउछन्, माया दिन्छन् । लुसलाई स्कुलमा सबैले मन पराउने हुन्छ । उनी पढाईमा मात्र नभएर बाहिरी क्रियाकलापमा पनि अब्बल हुन्छ । एकदिन शिक्षक विल्सनले लुसको साथिको लकरमा गाँजा भेट्छ । लुसको साथी डुसन निस्काशीत हुन्छ । लुस आफ्नो निर्दोष साथी डुसनको बदला लिन चहान्छ । रच्न थाल्छ योजना । लुस कुन हदसम्म पुग्छन् ? आफुले बनाएको जालमा कतै आफैं त फस्दैनन ? उसको परिवारले उसको कस्तो रुप देख्छ ?
ट्यारेन्टिनोको नवौं फिल्म । उनको कथा भन्ने शैली अरु भन्दा पृथक छ । उनको फिल्ममा जतिबेला जे पनि हुनसक्छ । अनावश्यक इन्ड्लेस वार्तालाप भैरहेको बेला बिचमा गोलि चल्न सक्छ । रगतको खोला बग्न सक्छ । फिल्म 1960 मा हलिउडमा घटेको भयानक घटनाबाट प्रभावित छ जसलाई ट्यारिन्टिनोले आफ्नो कल्पना मिसाइदिएर फरक बनाइदिएका छन् । फिल्मको मज्जा यसैमा छ । नायक रिक र उसको स्टन्ट डबल क्लिफको करियर ओरालो लाग्दैछ । उनिहरु दुबै चिन्तित छन् ।
यसैबिच उनिहरुको छिमेकी बन्न आइपुग्छ्न्, चर्चित निर्दशक रोमन पोलान्स्की र हलिउडमा तारा बन्ने सपना बुनेकी उनकी पत्नी स्यारोन । रिक उनिहरुसँग भेट्ने सपना बुन्छ । के रिकको सपना पूरा हुन्छ ? फिल्मले हलिउडको त्यो बेलाको समय देखाएको छ । मैले भनेनी ट्यारिन्टिनोको फिल्ममा जे पनि हुन सक्छ । खोला झैं सललल बगिरहेको फिल्ममा एक्कासी बाढी आउँछ, त्यो पनि रगतको । ट्यारेन्टिनोले 1960 मा घटेको घटनालाई यहीँ बदलिदिएका छन् ।
फिल्म जिम्मी फेल्स्को अटोवायोग्राफीमा आधारित बनेको छ । फिल्मको मुख्य भुमिकामा स्वयंम जिम्मी नै खेलेका छन् । जिम्मी आफ्नो मिल्ने साथी मोन्टसँग हरेकदिन शहर आउने हुन्छ । शहरमा एउटा घर छ जसलाई उसको हजुरबुबाले 1946 मा बनाएका थिए ।
जिम्मीलाई त्यो घरसँग एकदमै माया छ । ऊ जोडिएको छ त्यो घरसँग । एक प्रकारको अदृश्य सम्बन्ध छ, त्यो घरसँग । त्यो घरमा अरुनै मान्छेहरु बस्ने हुन्छ । कसरी हुन्छ त्यो घरलाई जिम्मी आफ्नो बनाउन चहान्छ । उसलाई उसको साथी मोन्टले चाहिदो सहयोग गर्छ । पारिवारिक कलहको कारण त्यहाँ बस्ने मान्छेहरुले घर छाडेर जान्छन् । जिम्मी र मोन्टले घरमा अधिकार जमाउछन् । अब के हुन्छ ? कथा कहाँ मोडिन्छ ? कता जोडिन्छ ?
“आइ एम स्टिल स्ट्यान्डिङ” गित सुन्नुभएको छ ? एल्टोन जोनलाई नचिन्ने को होला र ? “रकेटम्यान” यिनै महान म्युजिसियन एल्टोन जोनको जिवनमा आधारित फिल्म हो । एल्टोन जोनको वास्तविक नाम Reginald Dwight हो । संगीत दुनियाँमा नयाँ नामबाट चिनिन “एल्टोन” नाम उसले आफ्नो साथीबाट सापटी माग्छ र “जोन” अर्को म्युजिसियन “जोन लेनन”बाट ।
फिल्मले उसको सांगतिक यात्रालाई मात्रै देखाउदैन, आफैंसँगको लडाइँ पनि देखाउछ । नशाको लतमा उनी कसरी फस्छन् ? कसरी निस्किन्छन् ? उनको परिवारसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? उनी म्युजिसियन मात्रै होइन, एउटा आदर्शपात्र पनि हुन् । उसले आफू समलिङ्गी भएको घोषणा गरे । अहिले दुई सन्तान र पार्ट्नर डेभिडसँग खुशीसाथ बसेका छन् । रकेटम्यानले एउटा स्टारको कथा मात्र बताउदैन । स्टार हुनको लागि गरेको संघर्ष देखाउछ । चम्किलो अनुहार पछाडीको घमिलो छाया देखाउछ ।
आफू मर्दै छु भन्ने खबर आफैंलाई थाहा हुनुपर्छ या पर्दैन ? हजुरआमा ‘नाइनाइ’लाई फोक्सोको क्यान्सर छ । उनी केही समयको पाहुना हुन् । तीन महिनाभित्र उनलाई क्यानसरले लानेछ । डाक्टरले यो जानकारी परिवारको सदस्यहरुलाई बताउछ । हजुरआमा नाइनाइ यो खबरबाट बेखबर छ ।
सबैजना सँगै हुन, नाइनाइलाई अन्तिम बिदाइ गर्न, परिवारका सदस्यहरु र अरु आफन्तहरु सबैले मिलेर एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्छन् । कार्यक्रमको मुख्य योजनाबाट नाइनाइ अनविज्ञ छिन् । फिल्म एकदमै मजेदार छ । फिल्म निर्दशक स्वयंमकै जिवनमा घटेको घटनामा आधारित हो ।